ဗျူဟာမြောက် ဦးစားပေးများ - ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး သာတူညီမျှရှိသော Lancaster Block တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခြင်း။
မဟာဗျူဟာ ဦး စားပေး
“လန်ကက်စ်ဟာ ရပ်ကွက်တွေ ရှိတဲ့ မြို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၎င်းတို့နေထိုင်ရာအိမ်နီးချင်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး ပိုမိုမျှတသောအသိုက်အဝန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။”
ရပ်ကွက်အတွင်း ဆက်သွယ်မှု ဒါရိုက်တာ
ပုံ- Boys & Girls Club မှ ကလေးများသည် Milburn Park ရှိ အသစ်မွမ်းမံထားသော ကစားကွင်းကို ကြည့်နေသည်။
Lancaster ၏ ကွဲပြားပြီး တက်ကြွသော ရပ်ကွက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သူများကြား ဆက်သွယ်မှုကို တိုးပွားစေမည့် နေရာများကို ကြိုဆိုပါသည်။ ဒေသခံများသည် မိမိတို့ရပ်ကွက်၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြပါသည်။ ခံစားချက်တွေကို ဘေးကင်းပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အိမ်ရာများ၊ အများသုံးနေရာများနှင့် အဆောက်အဦများဖြင့် ခိုင်ခံ့သောအသိုက်အဝန်းကို ရေရှည်တည်တံ့စေရန်။
“ဘေးကင်းရေးဆိုတာ သုခချမ်းသာလို့ မြင်တယ်။ နေကောင်းလား? သင်၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသလား။ ဒီမေးခွန်းတွေက နေထိုင်သူတွေကို သူတို့လိုအပ်ပြီး ထိုက်တန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးတာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကို ပုံဆောင်ပါတယ်။”
Grace Mentzer၊ ဆိုနီယာ လီဘရွန်၊
နှင့် Leilany Tran
ရဲတပ်ဖွဲ့ လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် အိမ်ယာအမှုထမ်း
ပုံမှာ ဘယ်မှညာသို့ ဖြစ်သည်- Grace Mentzer (ရဲဌာန), Sonia LeBron (ကျန်းမာရေးဌာန), & Leilany Tran (ရဲဌာန)။
Lancaster တွင် အားလုံးအတွက် ဘေးကင်းပြီး၊ လမ်းလျှောက်နိုင်သော၊ သွားလာရနိုင်သော နေရာများ ရှိသည်။ သန်မာသောရပ်ကွက်များ၏ အုတ်မြစ်ဖြစ်သော ၎င်းတို့၏ရပ်ရွာများတွင် နေထိုင်သူများသည် ဘေးကင်းသည်ဟု ခံစားရသည်။
လမ်းများနှင့် အများသူငှာ နေရာများကို ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
“အလုပ်ကောင်းတစ်ခုသည် တည်ငြိမ်သော ၀င်ငွေကို ပေးဆောင်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအခါတွင် ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဖြစ်လာသည်။ City's Lead Program သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အလုပ်များကို ပံ့ပိုးပေးကာ မိသားစုများနှင့် အိမ်ပိုင်ရှင်များကို တိုက်ရိုက်ကူညီပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့၌ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ဘယ်မှညာပုံ- John, Darren (Lancaster မြို့), Jasmine (အိမ်ငှား) နှင့် Yosnanqui & သောမတ်စ် (အိမ်ရှင်s) Lead Program တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ.
ခိုင်မာသော အသိုက်အဝန်းတစ်ခု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည် နေထိုင်သူအားလုံးအတွက် အကျိုးပြုသော ရေရှည်တည်တံ့ပြီး သာတူညီမျှသော စီးပွားရေးဖြစ်သည်။ နေထိုင်သူများသည် မိသားစုထံ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။-အလုပ်အကိုင်များ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ခံစားချက်တွေကို ပါဝင်သည် ပွားများခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း၏ ကွဲပြားမှုကို ထင်ဟပ်စေသော ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ.
“ကြိုဆိုပြီး မတူကွဲပြားတဲ့မြို့တစ်ခုအနေနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်သူတွေနဲ့ သူတို့ပြောသမျှ ဘာသာစကားနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ်။ အားလုံးပါဝင်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဆက်သွယ်ရေးက မြို့ပြအစိုးရကို ပိုအဆင်ပြေစေတယ်။”
ဘယ်မှညာပုံ- ဆက်သွယ်ရေး Essientials LLC တည်ထောင်သူ Amer Al Fayadh၊ Amer မြို့တော်၏ ဘာသာစကား ဝင်ရောက်နိုင်မှု ကြိုးပမ်းမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကူညီပေးပြီး Zayra Falu။
မြို့တော်အစိုးရသည် နေထိုင်သူများအား နှိမ့်ချမှုဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သော၊ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးကာ အစဉ်တစိုက် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ခံစားချက်တွေကို ပိုမျှတတဲ့ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု။ လူသားနှင့်ဘဏ္ဍာရေး အရင်းအမြစ်များကို ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံး အသုံးချမှုများနှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု အကျိုးစီးပွားများကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော အများသူငှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ဆင့် ဟန်ချက်ညီညီ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ထိရောက်သော ဥပဒေနှင့် မူဝါဒ
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အသိပေးခြင်း။
ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး သာတူညီမျှရှိသော Lancaster တည်ဆောက်ရန်အတွက် သင့်စိတ်ကူးများကို တင်ပြပါ။
Lancaster မြို့တော်တွင် အသုံးပြုသည်။ Lancaster ဆက်ဆံပါ ၎င်း၏ မဟာဗျူဟာစီမံချက်အပြင် အခြားအများပြည်သူဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များအတွက် ရပ်ရွာဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များကို စုဆောင်းရန်။ အကြံဥာဏ်များ၊ စိုးရိမ်မှုများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို မျှဝေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်ဖိုရမ်တွင် ပါဝင်ပါ။